merolagani - बरुण हाइड्रोले बल्ल सार्वजनिक गर्याे प्रथम त्रैमासको रिपोर्ट, कसले गर्ने नियमन ?
बरुण हाइड्रोले बल्ल सार्वजनिक गर्याे प्रथम त्रैमासको रिपोर्ट, कसले गर्ने नियमन ?
Feb 10, 2018 Merolagani
धेरै कम्पनीहरुले दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेर सकाउनै लाग्दा बरुण हाइड्रोपावर कम्पनी (BARUN) ले भने शुक्रबार बल्ल प्रथम त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीकाे रिपाेर्टमा खुद नाफा एक करोड १८ लाख रुपैयाँ पुगेकाे उल्लेख छ । गत बर्ष कम्पनीकाे नाफा ६३ लाख ९ हजार रुपैयाँ रहेकाे थियाे ।
विद्युत बिक्रीबाट हुने आम्दानी बढेपछि कम्पनीले नाफा बढाउन सफल भएको हो । यस अवधिमा कम्पनीले तीन करोड ६९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विद्युत बिक्रीबाट आम्दानी गरेको छ । जुन गत बर्ष प्रथम त्रैमासको तुलनामा एक करोड ६२ लाख ३४ हजार बढी हो ।
कम्पनीको खर्च २८ लाख ९५ हजार रहेकाेमा अहिले वृद्धि भई ४३ लाख ९९ हजार पुगेपछि सञ्चालन नाफा भने घटेको छ । गत बर्षको तुलनामा सञ्चालन नाफा एक करोड ५८ लाख रुपैयाँले ह्रास आई तीन करोड २५ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा खुम्चिएको छ ।
कम्पनीसँग खुद चालू सम्पत्ति ११ करोड ६५ लाख रहेको छ भने १० करोड ८१ लाख दायित्व रहँदा खुद चालू सम्पत्ति ८४ लाख २४ हजार रहेको देखिन्छ ।
२५ करोड ५१ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको सेयर पूँजी बरुणको जगेडा कोषमा एक करोड ९१ लाख रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी बार्षिक १४ रुपैयाँ २० पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १०७ रुपैयाँ ५२ पैसा छ ।
हाइड्रोपावर र होटल समूहमा प्रतक्ष्य नियमनकारी निकाय नहुँदा यी समूहका कम्पनीहरुको मनपरि अझै पनि उस्तै चल्दै गरेको स्पष्ट देखिन्छ । यी समूहमा प्रतक्ष्य नियमनकारी निकाय नहुँदा लगानीकर्ताहरुले कम्पनीको धेरै सूचना समयमा नै पाउन बञ्चित हुने गरेका छन् । यसमा सबै सरोकारवालाहरुकाे ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।
लिबर्टी इनर्जीको शेयर नेप्सेमा सूचीकृत, आइतबारदेखि कारोबारमा आउने
Sep 18, 2020 12:09 PM
लिबर्टी इनर्जी कम्पनीको साधारण शेयर नेप्सेका सूचीकृत भएको छ। कम्पनीको एक करोड ५० लाख कित्ता साधारण शेयर शुक्रबार नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो।
शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य वृद्धि, यतिमा हुँदैछ कारोबार
Sep 18, 2020 11:55 AM
नेपाल बैंकले डाक्यो विशेष साधारण सभा, के छ विशेष प्रस्ताव?
Sep 18, 2020 09:07 AM
ई–कमर्शबाट कमाएको पैसा नेपालकै बैंक खातामा ल्याउने गरी नेपाल राष्ट्र बेंकले गर्यो नयाँ व्यवस्था
Sep 18, 2020 08:51 AM
महिला सहयात्राको नगद लाभांश बैंक खातामा
Sep 18, 2020 08:43 AM
असोज ११ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन गर्दै जनरल इन्स्योरेन्स
Sep 18, 2020 08:15 AM